တရုတ် Dedusting လေ့လာကြရအောင်, သံမဏိ Dedusting လေ့လာကြရအောင်, Flat Dedusting လေ့လာကြရအောင်ထုတ်လုပ်သူ
လေ့လာကြရအောင် Dedusting,သံမဏိ Dedusting လေ့လာကြရအောင်,flat Dedusting လေ့လာကြရအောင်,silicone ဖုန်ဖယ်ရှားရေးလေ့လာကြရအောင်,,
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: လေ့လာကြရအောင် Dedusting,သံမဏိ Dedusting လေ့လာကြရအောင်,flat Dedusting လေ့လာကြရအောင်,silicone ဖုန်ဖယ်ရှားရေးလေ့လာကြရအောင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လေ့လာကြရအောင် Dedusting
လေ့လာကြရအောင် Dedusting ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လေ့လာကြရအောင် Dedusting, သံမဏိ Dedusting လေ့လာကြရအောင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, flat Dedusting လေ့လာကြရအောင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏ဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ၏အရိုးစုသည်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္adopာန်ကိုချမှတ်သည်။ အိတ်၏ longitudinal နှင့် reverse bracing ring ကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေထားပြီး၊...
ဖုန်စုဆောင်းအရိုးစု ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ၏အရိုးစု (ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနိုင်သောအိတ်လှောင်အိမ်၊ ဖုန်မှုန့်ကယ်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားသည့်ဘောင်) အိတ်စစ်ထုတ်ကိရိယာ (အိတ်ဖုန်စုဆောင်းသူ) ၏အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအထည်အိတ်၏နံရိုးဟုလူသိများသည်။...
ဖုန်မှုန့်အိတ်များပါ ၀ င်သည့်ဖုန်ဖယ်ရှားရေးဘောင်သည်အိတ်စစ်ထုတ်ကိရိယာအတွက်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအရိုးစုတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၁။ ပတ်ပတ်လည်အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားသည့်အရာ (အပြင်ဘက်အိတ်) ၂။...
ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ သတ္တုဗေဒ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အစားအစာ၊ စံချိန်စံညွှန်းများပြုလုပ်ခြင်း အေလှောင်အိမ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးဘောင်သည်လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုလက်စွပ်နှင့် longitudinal...
ပုံသဏ္.ာန် ၁ ။ ၂ (ပြင်ပ filter) 3. (အပြင်ဘက် filter) (ဘဲဥပုံ, rhombus) 4. စာအိတ် ၅။ အပိုင်းများစွာပါ ၀ င်သောဘောင် (ဘဲဥပုံမျိုးစုံအပိုင်းဘောင်။ ပတ်ပတ်လည်အိတ်အမျိုးအစား multi section frame (ထည့်သွင်းအမျိုးအစား၊ ချက်အမျိုးအစား) ။ ၆။ ချောထုတ်ကုန်ဘောင်...
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ round အရိုး
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ပတ်ပတ်လည်။ ဘဲဥပုံ။ တိုက်ခန်း။ စာအိတ်ပုံသဏ္.ာန်။ Trapezoid ။ ကြယ်အမျိုးအစား။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရ Spring type သည်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအရိုးအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုဘဝ...
စိတ်ပျက်စရာအရိုးစု ဖုန်မှုန့်အိတ်များပါ ၀ င်သည့်ဖုန်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုသည်အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ၏လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖုန်စစ်အိတ်ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ရှစ်ခြောက်၊ ရှစ်၊ ဆယ်၊ ၁၂၊ ၁၆၊ ၁၈၊...
Pulse Duster သည်မတူညီသောသန့်ရှင်းရေးအချိန်နှင့်နည်းလမ်းအရသန့်ရှင်းသည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆင်ရေးတွင်ပိုကောင်းသောဖုန်မှုန့်သန့်စင်မှုအဆင့်များရရှိရန်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိန်ညှိသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများလည်ပတ်သောအခါ၊ မမျှော်လင့်သောအခြေအနေများပေါ်လာတတ်သည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ လေ့လာကြရအောင် Dedusting ပေးသွင်း
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: လေ့လာကြရအောင် Dedusting , သံမဏိ Dedusting လေ့လာကြရအောင် , flat Dedusting လေ့လာကြရအောင် , silicone ဖုန်ဖယ်ရှားရေးလေ့လာကြရအောင် , ဖုန်စုဆောင်း Fittings